Previous Article Ọkụ Ọgbụgba Egbuola Ụmụaka Atọ n'Obosi, Gbarìkọọ Ebe A Na-Añụ Mmanya
Ngbape ahịa ahụ bụ nke e mere n'isi mbido izu ụka a, site n'oke mmemme dara ụda a chịkọbara n'ihu ahịa ahụ dị na Nando n'okpuru ọchịchị Anambra East, iji wee mee ka ọzụzụ na orire malite na ya bụ ahịa.
N'okwu ya dịka ọ na-agbape ya bụ ahịa, nnukwu onye enyemaka pụrụ iche nyere aka na-achị steeti Anambra n'ihe gbasaara ọdụ ụgbọala na ụlọ ahịa, bụ maazị Cyril Obianọ, toro Chiifu Iwunọ maka ụdị ọrụ mmepe na ọrụ ime-ime obodo ahụ ọ bagidere na ya, bụ nke ọ kọwara dịka nke dabara adaba n'ịgbaso ụkpụrụ na atụmatụ ezi ọchịchị nke gọvanọ Willie Obianọ. Ọ kọwara nke ahụ dịka nke kwesiri nñòmí, ma kpọkuziekwa ndị ọzọ bụ ndị aka ji akụ ka ha ñòmie ụdị akparamagwa na atụmatụ dị otu ahụ, iji wee nye aka n'ịkwàlite ọrụ mmepe ime-ime obodo.
N'okwu nke ya na mmemme, ahụ, ya bụ nwa amadi rụrụ ahịa ahụ, bụ Chiifu Iwunọ kọwara na nke ahụ bụ iji bèlata ahụhụ ndị obodo ahụ na-ata na ihe nhịa ahụ ga na-agabiga n'ịzụ ahịa n'okpuru ụlọ ahịa ochie ahụ dakpọsịrị adakpọsị, ọ kachasị n'oge udummiri a. O mekwazịrị ka a mara na nke ahụ ga-enyekwa aka n'ịkwàdo ezi atụmatụ mnwogharị na ọrụ mmepe ahụ gọvanọ Obianọ ji n'aka na steeti ahụ.
Na ntụnye nkè ha n'otu n'otu, onyeisi oche na mmemme ahụ, bụ Ọkammụta Kenneth Ọfọkansị na onyeisi ọchịchị obodo Nando, bụ maazị Ignatịus Anago, kelere Chiifu Iwunọ n'ọrụ ọma ahụ, kpọpụtasịa ọtụtụ uru dị iche iche nke ahụ ga-abara ndị Nando, ma kpekwazie ekpere ka Chineke gaa n'ihu ịgọzi ya bụ onye ọrụ obi ọma mmaji kwuru mmaji.
Ọmarịcha ahịa ahụ bụ nke nwere ihe ruru àwàrà iri n'ọnụ ọgụgụ, ma bụrụkwa nke e kwuru na o were ego ruru nde Naịra iri atọ iji wee kwụba ya.